INook enoxolo ngakuMsinga - I-Airbnb
INook enoxolo ngakuMsinga
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCandace
** IZAphulelo kubusuku obu-7+, okukhona uhlala kokukhona uphezulu isaphulelo. :) Siyakuthanda ukubuk' iindwendwe ukulungiselela ukuhlala ixesha elide, ngoko ke usazise ukuba kukho nantoni na esinokuyenza ukuze sikwazi ukwenza oko.
** Thina kanye embindini Amish Country.
** Indawo yethu yokuhlala isandula ukulungiswa kwaye inochuku olugqibeleleyo ukuyenza ibe yindawo yokubalekela ekhumbulekayo kuwe. Sizabalazela ukuba indlu yethu icoceke kwaye yamkeleke.
** Sibekwe umva kwaye sikude kuyo yonke ingxolo, kodwa sisenemizuzu emi-3 kuphela kwindlela yama-30.
Indawo yethu ibekwe phakathi kwemijelo emibini enamanzi kunye nebhari entle ebomvu esandula ukulungiswa eyaqala ngeminyaka yoo-1700. Eyayifudula iyindawo yewayini ngoku yiRetreat. Uninzi lweendwendwe zethu ziyavuyisana malunga namava oxolo kunye nokuzola abawafumana kwindawo yethu.
Indawo yakho yokuhlala yinxalenye yebhari yethu enkulu ebomvu/iTwin Brook Retreat. Oko kuthetha ukuba zininzi indawo yokuba uzulazule kwaye wonwabele ubuhle bangaphandle. Unokuhlala phantsi ecaleni komlambo odibanisa ibhulorho ekungeneni kwendlela yokungena okanye wonwabele ipiknikhi kwenye indawo kuma-60+ eehektare zomhlaba wabucala. (Ibhaskithi yepiknikhi inikezelwe kwindlu yakho)
**Qaphela: i-TBR liziko elisoloko libamba imisitho ngaphakathi okanye ngaphandle. Ngoko ke, kukho ingxolo enokwenzeka. Ndithumele umyalezo ukubona ukuba azikho na iziganeko ngempelaveki obuza ngazo.
IIMPENDULO ZOLUDWE MALUNGA NEPROPATI YETHU:
- "Umoya uzolile kwaye uphumle." "Kunoxolo kwaye imihlaba igcinwe kakuhle."
- "Kukho i-ecosystem ye-HUGE ye-Fire-flys kule ndawo eyenza ukuba ubusuku bakho bube lizulu ELIPHUPHAYO, NGOKU"
"Ndilele bhetele kunokuba ndineenyanga kwaye ndonwabele ibhafu enzulu." "Ibhedi itofotofo kakhulu. Ndiqhele ukuba nengxaki yokulala kwindawo endingayaziyo kodwa bekungenjalo apha, bendiphandle xa intloko yam ibetha umqamelo."
Bukela ividiyo emfutshane malunga neNook apha: https://www.youtube.com/watch?v=A6EYVORx54k
- Singqongwe ngama-Amish kunye namaMennonite kwaye sazi uninzi lwabamelwane bethu ngokobuqu.
Kukho iivenkile zegrosari ezisijikelezileyo, i-Dutch-Way Farmers Market (1.8 miles), Weis (2.5 miles), Wal-Mart (4.7 miles), kunye nezinye ezininzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Candace
Mna nomyeni wam sihlala kwindlu yamatye ngaphesheya kweyadi ukusuka kwindlu. Ehlotyeni, uya kuhlala usibona sisebenza malunga nepropathi.